Isbeddel Lagu Samaynayo Wakhtiga La Qaban Doono Koobka Adduunka Ee 2022
HomeWararka MaantaIsbeddel Lagu Samaynayo Wakhtiga La Qaban Doono Koobka Adduunka Ee 2022
Waxa isbeddel lagu samayn doonaa bilaha la ciyaaari doono koobka adduunka ee sannadka 2022 marka ay Salaasada shirka isugu yimaaddaan xubnaha maamulka ee Fifa.
Xidhiidhka ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan in la qaban doono koobka adduunka bilaha November iyo December ee dhamaadka sannadka 2022, taas oo ay keentay cimilada kulaylka ah ee ka jirta wadanka Qatar bilaha xagaaga oo aan suurtogal ka dhigaynin in lagu ciyaari karo wadankan Carbeed.
Guddida fulinta oo xidhiidhka FIFA iyo xubno kale oo ka kala socda dunida kale ayaa waxa ay gelinka hore ee Isniinta bilaabeen in ay tagaan Qatar halkaas oo uu shir uga furmi doono, kadibna waxa ay soo gunaanadi doonaan doodad iyo go’aanka wakhtiga la qaban doono koobka adduunka iyadoo la waafajinayo cimilada wadankan Bariga dhexe.
Xidhiidhada kubadda cagta ee waddan kasta oo iyaguna ka qayb gelaya shirkan ayaa xamaasad u sii yeelay, kuwaas oo ku khasbanaan doona in ay is-beddel ku sameeyaan ciyaarihii dalalkooda sannadaha 2022 iyo 2023 maadaama uu xilligii ay ciyaari jireen soo dhex galayo Koobka Adduunka.
Fifa ayaa hore u shaacisay in ay eegi doonto suurtogal-nimada in koobka la qabto bilaha January iyo February oo laga daayo November iyo December, laakiin madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta ee qaaradda ASIA, Shaikh Salamn Bin Ebrahim Al-Khalifa in go’aanka lagu sallayn doono in la helo kala-doorasho kale.
Haddii heshiis laga gaadho qorshaha hawsha ay ka shirayaan go’aamiyeyaasha kubadda cagtu, waxa la ansixin doonaa go’aanka ay qaataan bisha March sida uu shaaciyey xoghayaha guud ee FIFA, Jerome Valcke.
“Waxa aanu ka shaqayn doonaa oo go’aanka kama dambaysta ah lagu shaacin doonaa shirka guddida fulinta ee FIFA ee March markaas oo ay shirka ugu dambeeya ka yeelan doonaan dhamaan dhinacyada daneeya kubadda cagta” sidaas ayuu yidhi Jerome Valcke oo u dhashay wadanka Faransiiska.
Wadanka Qatar ayaa waxa la soo dersay mushkilado la xidhiidha musuq-maasuq iyo laaluush ay bixiyeen si loogu qabto koobka dalkooda. Waxa kale oo jira eedaymo ah in xad-gudubyo ka dhan ah xuquuqda binu-aadamka ay ka dhacaan dalkaas.
Guusha Modric u Horseeday Madrid oo Soo Noolaysay Rajadii Hirdanka Horyaalka Ee Kooxda Zidane